Ciidamada Nabadsugida oo kala fur furay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo xiray – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Nabadsugida oo kala fur furay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo xiray
Ciidamada Nabadsugida qeybtooda miino baarista ayaa maanta ku guuleystay inay kala fur furaan gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay maqaayado ku dhow agagaarka Taalada Xaawo Taako ee degmada Boondheere.
Gaarigan oo ahaa gaari nooca Spacio ayaa la dhigay maqaayada Albaik iyo Bule Sky oo ah maqaayado laga cunteeyo, laguna shaaho, isla markaana ay dad badan fariistaan.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in Ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay fashiliyaan gaari qarax ka buuxay oo la doonayay in shacab lagu waxyeeleeyo.
“Kooxda UGUS waxay maanta gaari ay ku soo xireen waxyaabaha qarxa ay dhigeen maqaayado dad shacab fariistaan, waa Alle mahadii in qaraxii gaarigaas si nabad looga furay, waxaana ku guuleystay laanta miino baarista ee NISA oo waxyaabihii qaraxyada ahaa ee gaariga ku jiray ka soo saaraan oo ay kala dhig dhigaan”ayuu yiri Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir.
Goob joogayaal ayaa sheegay in gaariga qaraxa ka buuxay ee la dhigay maqaayadaha hortooda uu qarxi waayay.
Ciidamada ammaanka ayaa markii lagu wargeliyay gaariga qaraxa ka buuxiyay durbadiiba xiray wadada dhinac marta Taalada Xaawo Taako.
Wadada xiriirisa janaale iyo buufoow oo dayactir ka bilaaween ciidanka AMISOM (Daawo Sawirada)
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaanka Janaale
Wararka1 min ago
Wararka12 mins ago